Eto no ahafahanao mamela hevitra momba an'ity tranonkala ity, sambo, motera, jono, lohahevitra hafa, na manaova veloma anao fotsiny ary lazao anay hoe avy aiza ianao. Azafady, tsy misy politika, vazivazy, na zavatra tsy mety amin'ity tranonkala ity. Ianao dia tsy maintsy Hiditra raha tianao ny hiala hevitra.
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Wed, 06 / 28 / 2017 - 15: 41
61 / 62 Johnson 3hp tete azo
Mila fanampiana avy aminareo manam-pahaizana. Nandeha handeha hamita ity motera taloha ity aho, nahita zavatra vitsivitsy avy amin'ny boky boky evitra kely 52-54 saingy tsy milaza na inona na inona momba ny zava-mitranga amin'ity izy ity. Rehefa avy nampandeha azy tamin'ny rano iray barika ary avy eo nitahiry azy tamin'ny sawhorse hitako fa nisy paompy kely nanaparitaka lavaka kely iray tao ambanin'ilay fantsona marindrano toy ny sombin-drano sy ny fofona. Tokony hivoaka eto ve? Ary ny fihazakazahana ny karbaona ve alohan'ny hanidiana azy (toy ny isaky ny boky torolalana taloha) dia hisoroka izany? Vaovao aho miaraka amin'ity motera ity ary mila fanampiana ... Ary manandrana mitady tso-tanana maimaimpoana ... misaotra j bert
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 06 / 28 / 2017 - 22: 04
Namaly ny 61 / 62 Johnson 3hp tete azo by jwb.jw17
T feo toy ny rano ...
Ary toa toy ny rano dia mahazo an-ambany menaka tarika amin'ny alalan'ny tombo-kase mitete menaka. Tsy misy entona eto ambany ny powerhead, fa ny rano / menaka indray mitete avy angamba mitovy mandatsa-dranomaso. Ireo no fingotra tombo-kase izay mandeha manodidina ny driveshaft. Zava-mahazatra ny replac...See More
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 06 / 28 / 2017 - 22: 09
Ity ny lisitry ny faritra I ...
Ity ny lisitry ny faritra no mitambatra ho an'ny JW-17, anisan'izany ny menaka driveshaft tombo-kase. http://outboard-boat-motor-repair.com/motors/Johnson%203.0%20HP%201961-…
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 00: 21
Misaotra anao ttravis. Azoko antoka fa ny gazy dia manana loko maitso mitovy amin'ny menaka sy gazy mifangaro azy ary etona dia miala haingana mamela ilay menaka manga 2 maintso maitso. Tsy afaka namaky ny lahatsoratrao manontolo aho noho ny antony tsy fantatra .. azonao atao ve ny mandika sy mametaka azy amin'ny mailaka. Amin'ny jeremy.w.bert@gmail.com . Izaho efa naka eny ambany rakotra mba hijery raha afaka ny toerana misy ny loharano, rehefa nahita izany aho, ho avy ny lavaka kely fotsiny stbd lafiny ambany toerana ny lavaka hevi-dehibe mifandray amin'ny fiangonana. Nandany ny alina ny haneho ny tenany. Misy hevitra hafa? Tsy toy ny efa ho toa toy ny zavatra be ny vokatra. Manana na miditra tsimoramora sy mamoaka hanidy ... Izany no nanao izany indroa ... toa mandeha tsara ??? Thantsy ho an'ny fiverenana ...
napetraky ttravis ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 09: 07
Tsy azo antoka. Mety…
Tsy azo antoka. Mety hivoaka avy eo amin'ny pouche ny pouche de pouche. Mety mila esorinao ilay jiro mba hahitanao raha izany no niandohany. Raha mila laharana ampahany ianao dia ampahafantaro ahy izany ary hiezaka ny hitady izany ho anao aho. Eo am-panaovana fidirana amin'ny faritra ho an'ny maotera taloha rehetra aho, fa ny peratra sy ny tombo-kase dia ho avy aorian'ny ampahany. Heveriko fa ny fanontaniana lehibe apetrakao amin'ny tenanao dia hoe ohatrinona ny mamoaka azy io ary mendrika ahiahy ve ianao? Heveriko fa tsy maharary na inona na inona ny fananana fivoahana kely. Azonao atao ny manontany an'ireo olona ao amin'ny iboats.com hoe aiza no mety hahazoanao valiny tsara kokoa.
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 12: 07
Misaotra ttravis, mitete ampy manahy ny USCG
Hitako tamin'ity maraina ity fa betsaka kokoa ny entona tafaporitsaka. tsy dia be fa ampy hametrahana solila manopy ny rano! Handeha sambo / any amin'ny Mission Bay, SanDiego izahay hitsidika ny Zafikely ary tena voa izy ireo any momba ny loto rehetra. Misy olona milaza aminao fa nanaparitaka poizina ianao mba tsy hialan'ny antsam-baravarana any ambany RV anao any satria akoho antitra maloto (akohovavy maloto) maloto no mety hihinana vitsika voapoizina !!! Rehefa miteny ianao hoe "lohan'ny herinaratra" dia raisiko izany, ny tianao holazaina dia ny fiara mpamokatra starter / solika sy fivorian'ny ignition? Toa tsy maintsy hanao izany aho. Manomboka mieritreritra aho fa tafaporitsaka ny valizy mihidy. Koa satria nakatona ny ventiny dia mitaky fotoana fohy ny fantsona ateraky ny famoahana entona mba hahazoana rivotra ampy hivoahana. Izany no antony isehoan'izany isaky ny 24 ora. Tsy hitako ny toerana eo ivelan'ny karbaona toa mando. Manana rafitra mihoatra ny làlan-drivotra ve ilay karbôtera ka midina hatrany amin'ilay lavaka? Mety tsy ny fivoahan'ny valizy mihidy ihany fa ny valizy vent sy ny valindrana fanjaitra ao anaty lovia mitsingevana koa. Maloto Tena hanamboatra ny karbôna aho ary hosoloako io tombo-kase nolazainao tamiko io koa. Tsy mbola niasa tamin'ny motera an-dranomasina na tamin'ny kapoka 2 aho fa namotika karbaona marobe .. Nahasoa ny torohevitra .. Misaotra anao Travis! J Bert
napetraky ttravis ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 17: 46
Namaly ny Misaotra ttravis, mitete ampy manahy ny USCG by jwb.jw17
Ny powerhead dia somary mora ...
Mora esorina ny powerhead. Nataoko izany tao amin'ny tetikasako namboarina HP Johnson 5.5 izay azonao vakiana eto: http://outboard-boat-motor-repair.com/Johnson/Remove%20Lower%20Unit%20a…
Izaho koa dia manana fanoratana amin'ny HP Evinrude 3 izay mitovy amin'ny anananao amin'ny ankapobeny. Azonao vakiana eto izany: http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou…
Kevitra aho mamaky na satria ny carb sy ny ignitions dia tena mitovy.
Miala voly any Kalifornia miaraka amin'ireo zafikely. Ho any Wisconsin any amin'ny Lake Michigan aho. Manana rohy iray any ambony koa aho: https://www.youtube.com/watch?v=xC7QiRaJTbI&t=55s
Mila valizy fanidiana vaovao ho an'ny HP Evinrude 3 aho. Rehefa mahita iray aho dia hampahafantariko anao.
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 22: 45
Namaly ny Ny powerhead dia somary mora ... by ttravis
Powerhead sy ny carb
Misaotra. Eritreretiko fa mety hanao karba aloha aho ary avy eo dia tsidiho ny diky. Avy eo dia alao ny lohan'ny herinaratra,
Gas mitete avy lavaka ity
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 07 / 01 / 2017 - 02: 37
Namaly ny Powerhead sy ny carb by jwb.jw17
Tsy misy fiovana tehina teo amin'ny ...
Tsy misy fiovana tehina teo amin'ny 3 HP toy ny misy eo amin'ny 5.5 sy ny modely izay miova.
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 22: 57
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 23: 00
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 06 / 29 / 2017 - 23: 08
Tena tiako ny maka fotoana mba hanampy ahy toy izao ... Tiako ity maotera kely ny taona ihany no 10 tanora noho izaho, ary mifanaraka ny tongotro 14 sambo hazo mandresy tanteraka .I'll hiaro anao nandefa teo amin'ny fandrosoana ... manana zavatra maro loatra an-burner amin'izao fotoana izao. Jeremy
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Fri, 06 / 30 / 2017 - 21: 24
Gas tanky sy ny miditra tsimoramora
Rehefa hitako ny fantson-tsolika nakatona dia nesoriko ny fitoeran-tsolika ary nampidiriko tao anaty fanahy mineraly hanasana azy. Navelako hipetraka amin'ny vent misokatra izy ary tafaporitsaka ary rehefa nikatona ny vavahady dia mbola nanao ihany nefa zara raha. Ny nahagaga dia ny harafesina / loto kely fotsiny no nivoaka ary ireo faritra roa amin'ny fiarovana ny satroka ireo dia tsy maintsy nisy olona nanala azy hatry ny ela ary izany angamba no tsy nikatona tanteraka ny vent ..
Fiarovana amin'ny gaza
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Fri, 06 / 30 / 2017 - 21: 58
Ao amin'ny HP 5.5 anao dia manana fifandraisana ianao mba hisintaka. Tsy mahita an'io aho ary misy ihany ny screws 5. Misy takelaka kely eo ambonin'ny seam tsy mbola nesoriko.
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 01
Power lohany am-pita
Visy 2 avy amin'ny lafiny tsirairay ary iray amin'ny farany
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 07 / 01 / 2017 - 02: 39
Namaly ny Power lohany am-pita by jwb.jw17
Rip aho ka intall ...
Hihombo aho ary hampiasa tariby plug vaovao. Nahazo ny ahy tao amin'ny Tractor Supply aho. Afaka mandefa rohy aminao aho rahampitso rehefa mifoha bebe kokoa aho. Tehirizo ny tariby taloha handrefesana ny halavany.
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 07 / 01 / 2017 - 06: 57
Namaly ny Rip aho ka intall ... by ttravis
http://outboard-boat-motor-repair.com/parts/18-5225%20Spark%20Plug%20Wi… na mampiasa ny toerana fikarohana sy ny plug in "18-5225"
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Sat, 07 / 01 / 2017 - 13: 37
OK tsara ny fahatsapako. Hanaraka ny fanesorana ny lohan'ny fahefana aho ary avy eo dia mividy ny ampahany ... Hiverina any aho raha mila fanampiana aho ..mandroso indray!
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 16
Kilalaon'afo plug tariby
Topazo maso ity !! nisy olona tena nanamboatra an'io (chafing gear) tamin'ny kofehin-tariby sy ny fantsom-pifantsonana iray ary iza no mahalala hoe inona koa, rehefa mihetsika amin'ny toerana haingam-pandeha dia voafintina roa ny tariby satria takamoa goavambe no anaovan'ny fitaovana. avy eo nopetahany menaka io ka mihetsika. Inona no hataonao ? Te handrovitra azy aho ary hanana zavatra tsara kokoa.
Aza toerana N
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 18
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 20
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 07 / 06 / 2017 - 14: 43
Izany 3 / 4 toerana santimetatra teo ambanin'ny rehetra. Down ny tsy fotsy varahina
Nesorina tratran'ny mpanara ...
napetraky jwb.jw17 ny Thu, 07 / 06 / 2017 - 14: 48
Top cylinder 60lbs, ambany ny 50. dia hisintona ny lohany ary hanamarina / hanolo ny gasket sy ny fialamboly raha ilaina. Mbola misy rindrina mbola misy ve ity motera ity?
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Fri, 08 / 04 / 2017 - 10: 40
Namaly ny famatrarana fitsapana by jwb.jw17
JW 17 tetikasa
Hello Travis, naharay fotoana ihany aho mba hiasa amin'ity indray mitoraka ity .. Namboariko ny trangam-piaramanidina ambany kokoa ... Naka ora 3 aho mba handavaka ilay tombo-kase taloha! Nanomboka nanenina noho ny tsy fisian'ny rano tao anatin'ilay menaka fanosotra aho. Na izany aza, ny tombo-kase vaovao sy ny fitifirana vaovao dia ao. Mila mamela ve ny ganika manisy tombo-kase ny lohany mankany amin'ny vatana ambany? Ny girondo-doha koa, OK mba hamela izany koa ity? Tsy nanao motera an-dranomasina na 2 aho, ka mangataka aloha aho. Misaotra
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 08 / 04 / 2017 - 11: 56
Namaly ny JW 17 tetikasa by jwb.jw17
Atsipazo ny permatex anao! Ianao ...
Atsipazo ny permatex anao! Tsy mila izany ianao hamehezana ny lohan-doha amin'ny vatana, na ny kitapo lohan'ny loha.
Faly mandre fa mandroso ianao. Ho manam-pahaizana ianao rehefa vita.
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Sat, 08 / 05 / 2017 - 10: 50
Namaly ny Atsipazo ny permatex anao! Ianao ... by ttravis
OK misaotra, hanao asa fanadiovana tsara fotsiny aho ho azy ireo. Ny kitapom-bolako dia tokony ho avy tsy ho ela .. Heveriko fa tany am-boalohany ny tombo-kase, nisy loko varahina, ary natsatoka ara-bakiteny taorian'ny 55 taona !! Handeha amin'ny famerenana 50 sy 60 ankehitriny aho ary manantena fa hihatsara izany rehefa averiko miaraka .Ny gasket an-doha, na dia vonona aza ny hiova ary manantena aho fa ny fitsaboana Marvel Mystery Oil dia manatsara ny fahaizan'ny famehezana. . Izaho dia nanana Model Model 31 Pickup izay nisy lohany vaky ary ny rano nanaparitaka ny piston 4 rehetra teo amin'ny toerany. Nesoriko ny lohako ary nofenoiko MMO ireo varingarina. Taorian'ny werk dia nametaka ilay tànana aho ary naka sledge 8 pounds ary nanomboka nanandrana nanaparitaka ilay crank ary namindra zavatra. Ny andro voalohany dia nihetsika santimetatra vitsivitsy izy ary isan'andro dia somary nitombo kely ihany ary farany dia nivadika tanteraka .Mba 3 volana taty aoriana dia vitako ny nametaka crank azy ary nasiako tehamaina lohan-doha iray hafa, nanoratako azy ary nanomboka teo !!! Fahagagana sy porofon'ny faharetan'ny Model A sy MMO. Misaotra Tom, hampahafantariko anao ny vokany.
napetraky jwb.jw17 tamin'ny Sat, 08 / 05 / 2017 - 22: 36
Namaly ny Misaotra by jwb.jw17
JW17 ny fandehany tetikasa
Salama Tom, Andro tolakandro teo tokony ho 5 no niditra tao amin'ny fivarotako hiasa. Tonga tao amin'ny mailaka ilay kitapo karbika. Ny valizy fanjaitra taloha dia tsy nisy clip sy tendron'ny vy fa tsy ny rubber ..Nanana fotoana kely aho hampiasana ilay clip ary farany niondrika kely aho ary napetako. Heveriko fa ny tanjon'izany dia ny hahazoana antoka fa milatsaka miaraka amin'ny mitsingevana ny fanjaitra. Ny valizy tany am-boalohany dia tsy nisy alitara teo amboniny ... Ka ny arrester sy ny carb dia mirehitra, napetraka ny lohany, ary miverina amin'ny vatan'ny ambany ny lohan'ny herinaratra. Ny boky torolàlana Evinrude ao amin'ny tranokalanao dia milaza fa apetraho eo anilany ny motera mba hamenoana ny boaty. Nataoko izany ... Fanontaniana ... ?? Tokony hapetrako mahitsy ve izy io ary esory ny plug ambony mba hampidina ny haavony ho any an-davaka sa ho ok toa izany? Nofenoiko izy io hihoatra ny toerana marindrano. Mbola manana tariby plug hiatrehana aho. Mila manao fitsapana hafa momba ny famoahana valizy hafa koa aho alohan'ny hametrahana ny tanky sy ny valva ... Nahita basy kely tao anaty valva aho ary manantena fa hamehezana azy io izao..Efa nahita loharano vaventy vaovao ve ianao?
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 08 / 06 / 2017 - 12: 22
Namaly ny JW17 ny fandehany tetikasa by jwb.jw17
Tahaka ny halavitry ny farany ambany menaka ...
Tahaka ny halavitry ny farany ambany menaka mandeha, dia nataony matetika fotsiny diloilo no ao amin'ny tampony plug, ny maotera mitsangana ao amin'ny toerana mandra-manomboka ho avy nivoaka.
Toa efa nahita solika nikatona valves tao amin'ny eBay aho, saingy mbola tsy niasa tamin'ny HP 3 nataoko kelikely. Mihevitra aho fa varahina na fantsom-barahina vita amin'ny varahina 1/4 fotsiny io. Nanao ny fikarohana manaraka aho tamin'ny Amazon mba hizaha na misy zavatra izay miasa.
napetraky jwb.jw17 amin'ny Mon, 08 / 08 / 2017 - 10: 42
Namaly ny Tahaka ny halavitry ny farany ambany menaka ... by ttravis
Vonoina ny gazy
Eny hitako tamin'ny eBay. $ 55 !!!! Nosoratana tamin'ny teny rosiana ilay doka, ka azoko antoka izany ary tsy te handoa vola 55 aho. Menaka aidina hamenoana lavaka. Handeha any amin'ny tanàna aho anio, any amin'ny fivarotana fitaovana izay manana izay nilaiko rehetra ... Mety ho io no fotoana tsy ananan'izy ireo.
napetraky PatsRG8. ny Thu, 08 / 03 / 2017 - 10: 30
1956 Johnson tanky fiovam-po
Salama maraina- Vao avy nahavita ny tetik'asa fanovana tanky aho tamin'ny 1956 5.5hp ahy. Misedra olana miaraka amin'ilay tsipika solika / tsipika marina aho. Azonao atao ve ny milaza amiko ny tena habeny ampiasainao, mila mamelona azy amin'ny alàlan'ny sandrin'ny mpitrandraka aho ary ny fantsako ananako dia matevina.
napetraky ttravis ny Thu, 08 / 03 / 2017 - 11: 22
Namaly ny 1956 Johnson tanky fiovam-po by PatsRG8.
Ny solika tsipika ampiasain'ny ...
Ny tsipika fandefasan'ny solika ampiasain'i Johnson / Evinrude dia 3/8 na 5/16 santimetatra ao anaty savaivony (ID). Izy io dia tsipika solika mahazatra azonao alaina any amin'ny magazay mpivarotra fiara.
Ity ny rohy izay ahafahanao mahazo 5 / 16 ID tongotra 5-dalana, Amazon.com
Ity ny rohy ho an'ny 1 / 4 santimetatra ID 5 tongony tsipika:
napetraky PatsRG8. ny Thu, 08 / 03 / 2017 - 12: 02
Namaly ny Ny solika tsipika ampiasain'ny ... by ttravis
Misaotra anao. Nividy 1/4 teo ho eo aho fa tsy afaka namakivaky ilay valindrihana ambany izay nisy ilay rafitra tsipika roa. Toa matevina be ilay tsipika nampiasanao tamin'ny tranokala, ahoana no nampiorenanao ny tananao miasa?
napetraky PatsRG8. ny Thu, 08 / 03 / 2017 - 12: 06
Namaly ny solika tsipika by PatsRG8.
Ambany ny cowling
napetraky ttravis ny Thu, 08 / 03 / 2017 - 22: 14
Namaly ny Ambany ny cowling by PatsRG8.
Ao amin'ny tetikasako dia nosoloiko ny mpampitohy solika roa amin'ny tsipika fampifangaroana solika tokana eo amin'ny fonony moto. Tsy nitanjozotra namaky na teo ambanin'ny fanambanin'ny motera aho, ny fantson-tsolika.
Tsy hitako tao amin'ny Amazon.com izany, na izany aza, manana ao amin'ny eBay izy ireo. Hitady ny
"393334 solika connector"
napetraky newt6522 tamin'ny Sun, 08 / 13 / 2017 - 17: 19
Tsy mahazo gazy
Manana horsepower 1956 qd-17 10 aho tsy mahazo lasantsy. Manana spark aho ary mahazo lasantsy ao amin'ny volam-pandrefesana fa izany no nitariko ny karbaona ary madio ny fiaramanidina. misy soso-kevitra
napetraky ttravis amin'ny Mon, 08 / 14 / 2017 - 00: 24
Misaotra nitsidika. Ianao ...
Misaotra nitsidika. Manana fanontaniana tsara ianao.
Alao ny karibonetra, apetaho amin'ny ankihiben-tànanao na amin'ny felatananao ny manafold fandraisana ary sintomy ny tady fanombohana Tokony ho afaka mahatsapa suction ianao amin'izay fotoana izay. Raha tsy izany dia zahao ireo valves volotara. Raha afaka mahatsapa ny suction amin'ny manafold ianao dia alao antoka fa tery ny rivotra ny gasket anao. Ny bitsika kely indrindra dia toy ny tsindry pinina ao anaty mololo. Hahatonga ny karbaona tsy hisintona solika sy rivotra izany. Hamarino tsara fa manana vaovao ianao Carb Kit rehefa averinao miverina ny karbaona. Azonao atao koa ny manamarina ny valizy fanjaitra mitsingevana.
napetraky Timreimens amin'ny Mon, 08 / 14 / 2017 - 22: 46
Misaotra Tom noho ny fampahalalana tsara momba ny famerenana amin'ny laoniny ny 3hp ivelany. Novidiko ny motera samboko voalohany, Evinrude 1964hp Yachtwin tamin'ny vidiny $ 3 izay mila fanamboarana tsara. Soa ihany fa nokarakaraina ny carburetor, saingy mila fiheverana hafa betsaka izany. Toa tsara ny teboka sy ny condenser saingy ratsy ny coil ary koa ny tariby plug. Ny fonosan'ny lohan'ny varingarina dia nisy elanelana nopotehin'ny palitao rano ary ny lovia firakofako dia nisy lavaka maro no nohanina, saingy tsara ny boaty. Namboariko indray ny afo ary namboariko ny carburetor ary nirehitra izy ary nilamina tsara. Vao izao aho no nanafatra impeller vaovao sy ny lovia fanaronam-bava ary ny gasket. Tsy andriko ny hivoaka sy hanandrana azy amin'ny rano.
Te-handalo roa rohy Youtube aho izay hitako koa fa manampy.
(John Bright's) Johnson & Evinrude Carb manamboatra 3hp 50s & 60s https://www.youtube.com/watch?v=B2bvvnotA1k
(cajuncookone) horonan-tsary nirehitra Evinrude Gale sy Johnson https://www.youtube.com/watch?v=oTN8Ag_aj-8 (long segment 7-10 minitra, fa tsara)
Tim tany Maine
napetraky Lionel amin'ny Mon, 08 / 21 / 2017 - 22: 04
Heveriko fa tsy misy faritra azo ovaina eo amin'izy roa. Raha mandeha ny 1941 Johnson 3.3 HP, soloy ny tsipika solika ary ankafizo izany. Ho sarotra ny mahita faritra ho an'io maotera taloha io. Tsy manohana azy intsony i Evinrude, ary i Sierra Marine dia tsy manamboatra ampahany amin'ny motera efa antitra. Misy tranokala volo antitra ary koa google izay ahitanao ampahany. Nandritra ny taona maro izy ireo no nanao an'io motera io.
Ny 1958 Johnson 3.0 HP JW-14 anao dia maotera malaza ankehitriny. Betsaka ny faritra azo ampiasaina. Ity ny rohy iray izay manisy lisitra iombonana.
Te hilaza aho fa mendrika ny miezaka ny manamboatra sy mihazakazaka.
Manana 1941 ny 3.3hp sy 58 '3' johnson XNUMXhp.
Misy ampahany vondrona / fifanakalozana ve?
Ny 3.3 hp dia mihazakazaka fa ny tsipika fahatelo ary ny 3hp dia tsy mamoaka na mihazakazaka.
napetraky Lionel tamin'ny Fri, 08 / 25 / 2017 - 10: 35
Namaly ny Evrinrude 3.3hp 1941 by Lionel
Misaotra ny fanampiana.
Havelako hahafantatra izay mitranga ianao, na dia mety hisy aza.
napetraky cliffjohnsen tamin'ny Fri, 08 / 25 / 2017 - 17: 04
Izaho dia mpanarato 5.5 ...
Manana ny mpanjono 5.5-1956 XNUMX. coil vaovao sy teboka tsara daholo aho. Ny teboka dia mifototra na misokatra na mihidy. Heveriko fa tsy marina izany. Raha tsy mandeha ny kofehy sy ny tariby condensor, dia tsy voatsoroka
Misy soso-kevitra ve? samy coil manandrana 8ko amin'ny plug avy amin'ny tariby maitso. Miato tsindraindray i Spark.
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 08 / 26 / 2017 - 01: 01
Namaly ny Izaho dia mpanarato 5.5 ... by cliffjohnsen
Inona ny famakian-tsokosoko manao ...
Inona ny famakiana fanoherana azonao amin'ny condenser? Tokony ho avo izy io. Mety hanampy ny sary sasany.
napetraky Xavier56 tamin'ny Wed, 08 / 30 / 2017 - 16: 56
Johnson 5.5 Hp CD-20 - Tsy misy Spark
Manana Johnson 5.5 Hp CD-20 miaraka amin'ny No Spark aho. Ny Round Round dia azoko fa tsy mandeha ity motera ity ary nanomboka nanamboatra olona hafa aho. Nametraka Coil Vaovao, Condenser ary isa roa ry zareo. Tsy azoko lazaina raha nosoloina ireo tariby Spark Plug azo antoka fa vaovao ireo kapila, dia hita taratra amin'ny tarehin-javatra tena tsara ireo tariby ireo. Tsy misy Spark mihitsy, na spark tsy osa akory aza raha mitazona ilay plug ianao ary manolotra ilay raharaha. Nojereko daholo io ary tsy mahita olana. Novakiako ilay 1954-1964 Evinrude 5.5 HP Tune-UP Tetik'ady fandinganana ny tetikasa. Nojerena ireo sary ary niezaka hijery raha nisy zavatra napetraka tsy marina. Ny banga voaverina dia Ok. Tsy hitako izay tsy hitako. Naka sary ary ampitahaina amin'ilay sary mirindra, aza mahita zavatra hafa. Nahita iray tsy nisy spark aho fa tsy izy roa. Ny fanampiana rehetra dia hankasitrahana.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 04 / 2017 - 12: 17
Namaly ny Johnson 5.5 Hp CD-20 - Tsy misy Spark by Xavier56
Haka ohm metatra aho ...
Naka metatra ohm aho ary hizaha toetra ireo condenser sy coil. Diniho ihany koa ny tariby misy ny bara raha jerenao raha manana olana mifototra na mifandray ianao.
napetraky VintageRuns amin'ny Mon, 09 / 04 / 2017 - 09: 59
Miarahaba anao: Vao haingana aho no nividy ampahany tamin'ny disolembled tamin'ny 1965 3hp Johnson saingy sahirana amin'ny fametrahana ny fantson-drano indray. Misy "bracket" plastika kely eo amin'ny faran'ny fivorian'ny môtô an'ny fantson-drano ... saingy tsy hitako izay hametrahana an'ity farany ity ao amin'ny fivorian'ny motera. Tokony hesoriko eo amin'ny tsanganana ve ny fivorian'ny motera hametrahana ity fantson-drano ity?
Izay torohevitra rehetra dia raisina.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 04 / 2017 - 12: 20
Namaly ny 1965 3hp Johnson by VintageRuns
Tsy niasa tamin'ny HP 3 aho ...
Tsy niasa nandritra ny fotoana kelikely HP 3 aho ka tsy tadidiko ny fomba fiasa. Heveriko fa misy horonan-tsary youtube any izay mety haneho aminao izay tadiavinao, na mety misy olona iray nanala ny fahefana farany teo afaka mamaly ny fanontanianao.
napetraky MDM tamin'ny Fri, 09 / 15 / 2017 - 15: 12
Manangana Johnson Johnson 53 3hp aho. Tokony hampiasa zavatra ve amin'ny bolt aho mba hampihenana ny harafesina, toy ny menaka na hidy sns? Toy izany koa ny tonon-taolana eo amin'ny vatan'ny ambany?
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 09 / 16 / 2017 - 00: 03
Namaly ny 3hp johnson by MDM
Nataoko foana ny fanenjehana ...
Napetrako foana ny fanoherana ny afo, indrindra rehefa misy metaly samihafa ao anatiny. Hisaotra ny tenanao ianao amin'ny manaraka amin'ny famongorana ny bolt. Misafotofoto, fa zavatra tsara. https://www.amazon.com/Permatex-80078-Anti-Seize-Lubricant-Bottle/dp/B0…
napetraky 19evinridelvr58 tamin'ny Wed, 10 / 04 / 2017 - 20: 24
Add add extension
Niala tsiny tamin'ny famoahana izany ampahibemaso aho saingy tsy nahita rohy nifandray taminay. Manandrana misintona ny boky torolàlana ho an'ny tompona aho ho an'ny 1958 evinrude lightwin telo rehefa tsindrio ny fampidinana dia miteny amiko izy hoe tsindrio ny fanampim-panazavana, boaty mainty kely mipoitra afo iray segondra dia manjavona tsy afaka manao zavatra aho satria tsy afaka ge
t a sisa ity ... tranonkala dia tsy tena mpisolo vava..bibo mihitsy
napetraky ttravis ny Thu, 10 / 05 / 2017 - 07: 58
Namaly ny Add add extension by 19evinridelvr58
Misaotra ny namangy ahy ary ...
Misaotra anao mitsidika ary mandray ireo fanehoan-kevitra izay manondro lesoka afaka amboariko sy hatsaraiko amin'ity tranonkala ity. Vao avy nametraka ny moto sambo rehetra namboarin'i Evinrude / Johnson / OMC / BRP izay nataoko aho ary miasa am-pahavitrihana lisitr'ireo faritra ho an'ny maotera tsirairay. Misy bitsika maromaro tiako hatsaraina mba hanatsarana ny zavatra niainan'ny mpampiasa.
Miezaka mamantatra izay pejy misy anao aho rehefa mahita an'ity. Tsy nieritreritra aho hoe nanana rohy hampidinana rakitra PDF an'io boky io. Nandeha tany aho http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou… nefa tsy fantatro izay zavatra tsindrianao.
Mety ho ilay doka nataonao tamin'ny fisintomana rakitra iray dia doka google eo an-tampon'ny efijery? Ity misy sary nalaina tamin'ny dokambarotra heveriko fa mety hampifangaro. Tsy voafehiko loatra ny fanampiana omen'ny Google, saingy manampy amin'ny fandoavana an'ity tranonkala ity izy ireo. Ho hitako raha azoko sakanana io doka io satria ekeko fa mamitaka izany.
Hahita aho raha afaka mahita io tahiry PDF io ary mametraka rohy mankany aminy.
napetraky ttravis ny Thu, 10 / 05 / 2017 - 08: 10
Namaly ny Misaotra ny namangy ahy ary ... by ttravis
Mino aho fa nosakanako ...
Mino aho fa nosakanako io doka manokana io. Ity no doka voalohany nosakanako ka nahalala zavatra vaovao aho. Ho hitako raha afaka mahita an'io rakitra PDF io aho. Mety halevina any amin'ny toerana taloha ilay tranokala http://old.outboard-boat-motor-repair.com